Posted on October 20, 2017 October 20, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
Izibani LED kukhona entsha ubuchwepheshe energy esisindisa ukukhanyisa. Khanyisa likhipha Diode, LED, kuyinto Semiconductor aguqula energy kagesi ku amandla okukhanya.
Izibani LED zinhle kakhulu amandla savers, ukulondoloza kuze kufinyelele 20% ngenani lemali sokudliwa Halogen ukukhanyisa, okusho ukuthi silondoloza kakhulu ku energy izindleko. okuningi ngakho, Izibani LED babe sempilo isikhathi eside kakhulu kuneminyaka zonke olunye uhlobo ukukhanyisa.
Ngezinye TACHYON, siyaqonda ukuthi njengoba izibani LED uyaqhubeka ukuthandwa ngaphezulu futhi kancane kancane iyasetshenziswa emikhakheni ehlukene, kufanele kube nesidingo sokuba egcizelele ukwenza kahle hle i uhlobo isicelo ngasinye. Yingakho, siye bedele okuningi ku ekhuphuka nge izinhlobonhlobo ngokwezifiso LED Tailor wazenza izinkanyiso ukuthuthukisa ukusebenza ephelele futhi sokufaneleka oyinhloko ensimini kwesicelo ngasinye.
Ngo yezemidlalo, le emnandi nobungqabavu amandla ngokwezifiso okusezingeni eliphezulu izibani captivates kudaleke injabulo phakathi izibukeli, ngisho phambi Umbukiso uqala. Ngesikhathi lo mdlalo, izibani LED brilliant kwenza zonke ukuhambisa yangempela.
LED ukukhanyisa ubuchwepheshe kunikeza indawo afanayo siko ezenziwe ezinikeza okukhanyisa lapho futhi kuyadingeka ukuthi, noma nge-ukhomba ephaketheni noma isikhukhula Amasimu.
Ngezinye TACHYON, ngezifiso izibani zethu LED ngoba izinkundla uyokwenzela acacile futhi umbukwane ukusakazwa ithelevishini kanye izithombe acwebile. Thina bexhashazwa ubunjalo enemisebenzi kwezibani LED ngu lolungenamaphutsa zokuhlanganisa izici ephezulu Umbuso ka LED zalapho ukukhanya nge isikhalo esikhulu yobuhle.
Nazi ezinye izici olukhethekile ngokwezifiso LED inkundla izibani zethu:
80,000 amahora yempilo
Retrofits at kuze 150 amayintshi eziphakeme
A lwemidlalo Ungashintshanisa ngempumelelo 4,000W HID zalapho
Izakhiwo kwezifiso inkundla ngayinye sezwe
Excellent ukukhanyisa imiklamo ukuthi uhlangana ne yalolucwaningo ejwayelekile
State-of-the-art yokukhanya ngoba acwebile ngisho Ukusabalala.
Ngezifiso LED Flood Lights
Ungakwazi ezikhanyisa labo 'amnyama' nge ngokwezifiso LED izibani zethu excellently-elikhanyayo uzamcolo.
ngokwezifiso zethu LED izibani akuzona nenhle kuphela imiklamo kodwa futhi oncomekayo ekusebenzeni kwabo. Bona kahle ubuyisela izibani ezivamile like halogens, metal halides kanye sodium floodlights.
ngokwezifiso LED floodlights wethu unayo izici ezilandelayo kakhulu:
IP66 dustproof, manzi weatherproof nge ngomshini inbuilt
kubakaki Lockable futhi rotable
ukusebenza Superb namadizayini nenhle
Kahle ukuhanjwa kokubili nokusetshenziswa ongaphandle futhi zasendlini
Yiba izindlela ezahlukene: -Daylight (5K), Yemvelo (4K) futhi Warm (3K).
Ngezifiso LED High Bay Lights
izibani zethu ngokwezifiso LED for amatheku okusezingeni eliphezulu ephumelelayo kakhulu. Njengoba ayesethole eziklanyelwe amatheku okusezingeni eliphezulu, Zingamashumi ephelele ukukhanyisa izixazululo zemidlalo, emafektri ezinkulu isitoreji, yokukhiqiza izindawo, abandayo isitoreji emafektri, elisekela ezempi, hangars izindiza njll. Ziyakwazi esikhundleni kangcono HID futhi HPS ukukhanya zalapho.
Retrofitting esiku zezimboni halide metal izibani nge ngokwezifiso LED bay okusezingeni eliphezulu izibani zethu ngeke kakhulu ukunciphisa izindleko amandla inkampani yakho yokukhiqiza ngenxa kwagezi sici kwezibani LED. Lokhu kuzophinde ukunciphisa izindleko sezizonke yesondlo.
Kusukela lokushisa eliphezulu izitshalo steel ukuze izitshalo yokukhiqiza ezonakalisayo kakhulu, aluminium imbiza amakamelo kanye smelters ukuze izitshalo iphepha yokukhiqiza, ngokwezifiso yethu kakhulu efanelekayo zonke izinhlobo amatheku okusezingeni eliphezulu ikhanyisa izidingo.
Ngezifiso LED Street Lights
I natures eziyinkimbinkimbi yezokuthutha izindawo shayela yezinhlobo ezahlukene ukukhanyisa, ukuze kube lula ukuphepha izimpilo abuye futhi asindise izindleko yesondlo.
ngokwezifiso ukukhanya kwethu emgwaqweni LED izindleko ukukhetha ngempumelelo futhi maintainable for emadolobheni nasemadolobhaneni namuhla futhi kuqhubeke kuze kube sesikhathini esizayo. Zethu ngokwezifiso LED ukukhanya endleleni eyongayo futhi engabizi Kulula kakhulu ukugcina, ukuphatha kanye nokulungiswa (uma ukuhlukaniswa).
Ngokusebenzisa izibani zethu ngokwezifiso LED, uzobe ngokuletha ubuhle, lezokuphepha nokuvikela ngenhloso ezitaladini nothelawayeka. Lezi izibani emgwaqweni ngokwezifiso LED ukuletha brilliant, agqamile ngisho ukukhanya emigwaqeni. okuningi ngakho, ziklanyelwe eyodwa nangezinto zokwakha zingamelana ukuwohloka ngaphansi kwezimo ezihlukahlukene sezulu obanika yempilo alandisa eyinqaba.
Custom LED Umhubhe Khanyisa
Ngezinye TACHYON, ngokwezifiso Umhubhe LED yethu ukukhanya inikeza ekhaliphile acacile eyonga ugesi okukhanyisa ngoba imihubhe underpasses. Ngokusebenzisa ezintsha yakamuva kakhulu emkhakheni ubuchwepheshe LED, izibani zethu LED ngezifiso ukunikeza nokwehla kwezinga kokubili izindleko energy nezindleko yesondlo.
ngokwezifiso LED Umhubhe izibani zethu izici ezilandelayo:
umklamo okulula ukufakwa lula
Anti-glare ngisho ukukhanya ezingeni
Kakhulu conductive-magnesium alloy
Lumen ezingeni ezisukela 10,500lm ukuba 21,000lm
Ngezinye TACHYON, sihlale beveza izibani ngokwezifiso LED of Ukucaciswa ahlukahlukene ukuze uhlangane izidingo ezihlukahlukene amaklayenti ethu. Sizimisele ukukhiqiza state-of-the-art ngokwezifiso izibani LED zazo kangcono izinjongo ezithile.
Uphenyo ku ngokwezifiso Lights Imikhiqizo
Uma ufuna ngendlela oyifisayo ngelakho LED Lights, sicela ukhululeke ukusithumelela umlayezo imeyili info@tachyonlight.com noma ngokugcwalisa ifomu lokuxhumana ngezansi. Sibheke phambili emyalezweni wakho.